Betsafe dia toeram-piarovana azo antoka, casino licence, bonus avo lenta
Bonus 100% + spin maimaimpoana
3000 PLN bonus + 400 spins malalaka
Fametrahana / fanalana haingana
Serivisy amin'ny teny poloney
Tombony avo lenta
Lalao isan-karazany amin'ny lalao
NetEnt, Microgaming, Leander, NeoGames, Nolimit City, NYX, Lalao Inc, Evolisiona, Thunderkick, Lalao Mena Tiger, Quickspin, Play'n Go, iSoftBet
Live chat, Email, telefaona
EcoPayz, famindrana ny Banky, matoky, Visa, MasterCard Maestro
EcoPayz, famindrana ny Banky, matoky, Visa, MasterCard
Betsafe dia tsy vitan'ny filokana amin'ny fanatanjahan-tena ihany, fa trano filokana an-tserasera be dia be misy lalao sy bonus koa hanombohana anao.
Iray amin'ireo sehatra an-tserasera lehibe indrindra ho an'ny mpilalao izay miloka amin'ny valim-panatanjahantena ary ho an'ireo mifantoka amin'ny filokana an-tserasera. Misy tolotra lehibe azo alaina ho an'ny mpilalao lehibe tsirairay ao amin'ny pejy lehibe, izay ahafahan'ny mpilalao misafidy raha te hikatsaka vokatra ara-panatanjahantena izy na handeha any amin'ny casino (na casino live).
Ny tranokala mangarahara an'ny casino dia manaitra tsy ny sary mifanaraka aminy ihany, fa ny karazany sy ny tolotra omeny ihany koa, izay na dia eo aza ny habeny dia nitafy endrika sary mazava. Rehefa mitsidika ny tranokalan'ny sambany dia tsy tokony hisy hahatsapa ho very - ny isan'ny lalao sy ny zavatra atolotry ny casino dia tombony lehibe. Ny zava-misy mahaliana dia ny fahafantarana mialoha ny valim-pifidianana mivantana sy ny safidin'ny casino mivantana, saingy holazainay izany rehefa mitanisa ireo lafy tsara izay tondrahan'ny Betsafe ny mpanjifany.
Ity misy ilay atolotry ny Betsafe Casino izay manasa ireo mpilalao ao amin'ilay tranokala www.betsafe65.com
Fa inona no mendrika?
• manome fahafaham-po amin'ny filokana mivantana. Afaka mifidy amin'ny valiny na safidy fanatanjahantena manokana mandritra ny fivoriana ianao. Ankoatra ny filokana, Betsafe dia casino live, i.e. lalao tena misy an-tserasera amin'ny mpilalao hafa.
• Ho an'ireo mpilalao nanapa-kevitra ny hisoratra kaonty, Betsafe dia manolotra 100% fandraisana am-bidy hatramin'ny PLN 2000
• Tsy mifarana izao ny bonus. Betsafe dia nanomana fotoana manokana ho an'ny mpilalao finday, izany hoe ho an'ireo izay milalao sy mitsidika ny tranonkala amin'ny alàlan'ny finday na takelaka. Ny bonus mobile (anarana ofisialy) dia fanampiny 50% amin'ny petra-bolanao. Eto ihany koa, misy fetra PLN 100. Ankoatr'izay, i Betsafe dia mampiroborobo ny filokana ara-panatanjahantena - bonus PLN 250 ho an'ireo mametraka ny filokana ara-panatanjahantena voalohany.
• Ny fanohanana ny vola poloney dia azo antoka fa hahafaly ny mpilalao avy amin'ny firenentsika - Betsafe dia niomana tamin'ny fanitarana azy tany Polonina tamin'ny alàlan'ny fampidirana ny fanohanana ny zloty poloney.
• Tsy ny zava-drehetra amin'ny fividianana ny volan'ny fianakaviantsika Betsafe dia tranonkala poloney tanteraka izay mifanentana amin'ny fiteny ihany koa ny fiteny.
• Sa ambany ve ny vola sy ny tranokala amin'ny teny poloney? Fanampiana helpline sy elektronika maimaim-poana izay miasa 24 ora, andro 7 isan-kerinandro. Mazava ho azy amin'ny teny poloney feno.
• Betsaka ny safidy mifandraika amin'ny filokana. Betsafe koa dia manana tolotra manokana. Ilaina ny misoratra anarana amin'ny kaonty casino raha mahazo fampandrenesana ny fampiroboroboana maro isan-karazany. Ny casino dia manana fampiharana finday maimaim-poana koa amin'ny filalaovana sy fitsirihana ireo fahafinaretana avy amin'ny tontolon'ny filokana.
• Farany, ny serizy iray izay hahafaly ny geeks amin'ny fantsom-pifidianana samihafa Betsafe satria iray amin'ireo casinos vitsivitsy dia manolotra fantsona manankarena indrindra izay ahafahantsika mametraka sy manala vola. Ireto izy ireo: EcoPayz, Transfer Bank, matoky, Visa, MasterCard, Maestro.
Fanomezana filokana sy filokana voaporofo. Toy izao no azo hamintinana ny Betsafe amin'ny teny vitsivitsy - ny crescendo filokana ara-panatanjahantena ary ankehitriny koa ny sehatra casino.
»Manomboha milalao ao Betsafe